हमला २०४७- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कुनै पनि व्यक्तिको वैचारिक प्रतिबद्धताको मापदण्ड संघर्षको अवस्थामा नभई सत्तामा पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । शक्तिमा नपुगुन्जेल प्रजातन्त्रवादी/अग्रगामी र भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यी मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता र परीक्षा सत्तामा पुगेपछि मात्रै अवगत हुन्छ ।
असार १३, २०७७ प्रकाशचन्द्र लोहनी
घटना २०४७ सालको हो । ३० वर्ष भइसक्यो । त्यसबेलाको घटना सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ हुन्छ । तर, साथसाथै हाँसो पनि उठ्छ । पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४७ कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रबाट नयाँ संविधान जारी भयो ।
सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्ना विचार लिएर जनतामा जान पाउने भए । यसैबीच राप्रपा बेग्लाबेग्लै दुई दलको रूपमा स्थापित भए । एउटाको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापाले गरे भने अर्कोको नेतृत्व लोकेन्द्रबहादुर चन्दले । म, पशुपति शमशेर, पद्मसुन्दर लावती, हेमबहादुर मल्ल आदि लोकेन्द्रजीको नेतृत्वको दलमा थियौं । हामीले राप्रपा एउटै हुनुपर्छ भनेर धेरै कोसिस गर्‍यौं । तर, लोकेन्द्रजी र सूर्यबहादुरजीको व्यक्तित्व टकरावका कारण त्यसो गर्न सकिएन ।
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले त्यसबखत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आक्रोश दुवै राप्रपाप्रति उग्र थियो । जहाँसम्म एमाले थियो, उसको विरोध कांग्रेससँग त थियो तर हामीलाई गाली गर्ने र खेद्ने कुरामा दुवै दलको कुरो मिलेको थियो । दुवै दल हामीलाई संगठन गर्न दिने मनस्थितिमा देखिँदैनथे । तर, हामीहरू संगठन बढाउन कस्सिएका थियौं ।
हामीले २०४७ साल मंसिरबाट देशका विभिन्न भागमा आमसभा गर्ने निर्णय गर्‍यौं । आमसभाको पहिलो स्थान जनकपुर थियो । त्यसबखत त्यहाँ मुख्य नेता हेमबहादुर मल्ल थिए । उनी मधेसको राजनीति र वातावरणमा पूरै भिजेका थिए । २०४२ सालको चुनावमा देशैभरिमा सबैभन्दा बढी भोट उनैले ल्याएका थिए । मल्ललाई हामीले सोध्यौं, ‘आभसभामा कांग्रेस–एमालेबाट हमला हुन सक्छ, कसरी मुकाबिला गर्ने ?’ राप्रपा आफैँले आफ्ना नेताहरूको सुरक्षा गर्छ भन्नेमा मल्लजी विश्वस्त थिए ।
आमसभामा भाग लिन लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा. मोहम्मद मोहसिन र म हवाइजहाजबाट जनकपुर पुग्यौं । हाम्रो स्वागतमा मल्लजी अगाडि उभिएका थिए भने कम्तीमा पाँच हजार मानिसको भीड राप्रपा जिन्दावादको नारा लगाइरहेको थियो । मल्लजीका समर्थक सबैजसो गाउँबाट आएका रहेछन् । हामीलाई पाहुनाघर पुर्‍याएर उनीहरू आ–आफ्ना गाउँतिर हिँडे । हामी त्यस दिन विभिन्न भेटघाटमा लाग्यौं ।
भोलिपल्ट दिउँसो ११ बजे हामी पार्टी कार्यालय पुग्यौं । र, जिल्लास्तरीय नेताहरूसँग घरको एक तलामाथि बसेर छलफल थाल्यौं । करिब १२ बजेतिर हामी बसेको घरअगाडि नारा लाग्न सुरु भयो । २५ जनाजति मानिस नारा लगाउँदै हामीलाई गाली गरिरहेका थिए । ३ बजेसम्म भीडको संख्या ५० जनाजति पुगेको थियो । हामीले प्रहरीलाई खबर गर्‍यौं । तर, प्रहरीले हाम्रो अनुरोध सुनेको नसुनेझैं गर्‍यो । प्रहरी नआउने ढुक्क भएपछि हाम्राविरुद्ध नारा लगाउनेहरू झन् उग्र हुँदै गए । ६ बजेसम्ममा करिब १०० जनाजति प्रदर्शनकारीले हामी बसेको घर घेरे । नारा सुन्दा उनीहरू रक्सी खाएर आएका हुन् भन्ने स्पष्ट बुझिन्थ्यो ।
करिब साढे ६ बजे हल्का अँध्यारो भइसकेपछि प्रहरीको एउटा टोली हामी बसेको कोठमा आयो । प्रहरीले भनेको थियो, ‘हामीलाई निर्देशन छ— लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटा र डा. लोहनीलाई सुरक्षा दिएर लैजानू र अरूको वास्ता नगर्नू ।’ त्यसपछि राजेश्वर देवकोटाले भने, ‘भीडको उद्देश्य हेमबहादुर मल्ललाई मार्ने हो । त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । लोकेन्द्रजी र हेमबहादुरजीलाई पुलिसको सुरक्षामा बाहिर पठाऊँ । हामीचाहिँ कोठामै बसौं । जे पर्ला देखा जाएगा १’ मलाई उनको सल्लाह ठीक लाग्यो । प्रहरीले चन्द र मल्ललाई लिएर गए ।
प्रहरी हिँड्नेबित्तिकै चौरमा बसेको भीड भर्‍याङ चढेर एक तलामाथिको हाम्रो कोठातिर आउन थाल्यो । मलाई लाग्यो, ‘आज यहीँ मरिने भइयो ।’ एक मनले त जे भए पनि हाम्रो तीर्थस्थल जनकपुरमै मर्नु लेखेको रैछ भन्ने लाग्यो । मैले तुरुन्त कोठामा छिर्ने ढोका बन्द गरेँ र बत्ती निभाएँ ।
भीडले कोठाको ढोका फोर्‍यो । तर, कोठा अँध्यारो भएकाले कसैले कसैलाई चिनेन । म ढोकाछेउ उभिएको थिएँ । ढोका फुट्नेबित्तिकै लुसुक्क बाहिर निस्केर भर्‍याङ हुँदै तल झरेँ । झरिसकेपछि दायाँ जाने कि बायाँ, थाहा थिएन । जे पर्ला भनेर दायाँतिर लागेँ । करिब सय कदम मात्रै हिँडेको थिए, पछिल्तिरबाट आवाज आयो, ‘ऊ त्यै हो....मार, मार ।’
अब दौडिए मात्र बाँचिन्छ भन्ने लाग्यो । दौडिन खोजें । तर, आश्चर्य १ दौडिन सकिनँ । मलाई भीडले छोप्यो र मुक्का बर्साउन थाल्यो । म शारीरिक रूपमा कमजोर मानिस होइन । २०२७ सालमा नख्खु जेलमा थुनिँदा सिरहाका नसिबलाल यादव भन्ने कैदीसँग पहलमानी सिकेको थिएँ । २०४० सालमा अर्थमन्त्री हुँदा त्रिपुरेश्वर रंगशालामा जगत गौचनसँग कराँते पनि सिकेको थिएँ । त्यसले अलिकति काम गर्‍यो । मुख त बचाएँ तैपनि ओठ काटियो, ढाड भने मेरो बलियै रहेछ, पहलमानी खेल्दा सायद नसिबलालको प्रशिक्षणले काम गर्‍यो । ढाडमा जति मुक्का हाने पनि म ढलिनँ । तर, बेसुरमा कराइरहेको थिएँ । के भनेर कराइरहेको थिएँ थाहा थिएन । एक छिनका लागि चकनाचुर भएर रगताम्य भएको मेरो आफ्नै अनुहार आफैंले देखेझैं लाग्यो । अनि तुरुन्तै मेरो लास देखेर मेरो बुबा–आमा, छोरा–छोरी रोएको देखें । क्षणभरमै सबै घटना भएको देखें ।
अचानक दुई युवकले दरोसँग मेरो पाखुरा समातेको महसुस गरें । उनीहरूले मलाई घिच्याएर एउटा गल्लीतिर लगे र म बाचेँ । पछि थाहा पाएँ, मलाई जीवनदान दिने दुई युवकको नाम थियो— विवेकानन्द ठाकुर र धर्मेन्द्र झा । गल्लीबाट ती युवाले मलाई महेन्द्रनारायण निधिको घरमा पुर्‍याए । ओठ काटिएर अलिकति रगत आएको थियो । दाँत भाँच्चिएको रैनछ । लाग्यो— अब बाँचे । मृत्युसँगको त्यो निकटता एक किसिमले नौलो अनुभूति थियो ।
महेन्द्रनारायण निधिको घरमा केही बेर बसेँ । यत्तिकैमा एक अधवैंसे मानिस आइपुगे । उनले आफूलाई आनन्द ढुंगाना भनी चिनाए । हुन नहुने घटना भयो भनी दु:ख प्रकट गरे । उनैले सोधे, ‘डाक्टर साहेब १ भोक लागेको होला । केही मगाइदिऊँ ?’ मैले ‘हुन्छ’ भने । केही मिनेटमै मेरा लागि चारओटा सुक्खा रोटी र लौकाको तरकारी आइपुग्यो । मलाई लौकाको तरकारी पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । तर, त्यस दिन त्यो रोटी र लौकाको पिरो तरकारी असाध्यै मन पर्‍यो । मैले आनन्द ढुंगानालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिएँ ।
रातको १० बजेतिर केही सहयोगी युवाले डोर्‍याउँदै मलाई प्रहरी कार्यालय पुर्‍याए । दृश्य अनौठो थियो । त्यहाँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द, हेमबहादुर मल्ललगायत भीडबाट बाँचेर आएका अरू थुप्रै थिए । अब हाम्रो सामुन्ने प्रश्न थियो— भोलिको आमसभामा जाने कि नजाने ? त्यहाँ बान्तवा थरका एक प्रहरी हाकिम रहेछन् । उनी कम बोल्ने र एकदमै भलाद्मी स्वभावका थिए । हामीले उनीसँग राय माग्यौं । उनको भनाइ थियो, ‘राजनीति तपार्इंहरूले बुझ्नुभएकै छ, आमसभामा के होला म ग्यारेन्टी गर्न सक्तिनँ । तर, मेरो मनदेखिको राय छ, तपाईंहरू भोलि आमसभामा नगएर जहाजबाट काठमाडौं फिर्ता हुनुस् ।’
हामी यस्तो सल्लाह मान्न तयार थिएनौं । यसरी फिर्ता हुँदा नेताहरू तराईबाट भागेको सन्देश जाने र पार्टीको अस्तित्वमै धक्का लाग्न सक्ने हुनाले भिडेरै भए पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नैपर्छ भन्ने राय मेरो थियो । त्यस रायमा लोकेन्द्रजीको पनि समर्थन थियो । हामीलाई त्यहाँ बल दिने भूपू माननीय महेन्द्र राय थिए । उनी एक साहसी नेता थिए । कार्यक्रममा प्रहरीले सुरक्षा नदिए हामी आफैं सुरक्षा दिन्छौं भन्ने उनको अठोट थियो ।
भोलिपल्ट ११ बजे जलेश्वर पुग्यौं । अवस्था सामान्य थियो । ट्रयाक्टरमा मानिसहरू ल्याइँदै थिए । करिब १ बजे स्थानीय हाइस्कुलको चउरमा आमसभा सुरु भयो । हाम्रा सुरक्षाका लागि महेन्द्र राय र उनका ५–७ जना मानिस लठ्ठी लिएर मञ्चनजिकै बसेका थिए । महेन्द्र ६ फिटभन्दा अग्ला मानिस थिए र शारीरिक रूपमा बलिया थिए । सभाको अगाडि श्रोता थिए । तिनको पछाडि प्रहरी थिए र प्रहरीको पछाडि ५०–६० जना युवाको जत्था थियो । कार्यक्रम सुरु भयो । एकै छिनमा प्रहरीभन्दा पछाडिको जत्थाले होहल्ला गर्दै हामीविरुद्ध नारा लगाउन थाल्यो । यो देखेपछि महेन्द्र राय र उनको टोली नारा लगाउनेविरुद्ध जाइलागे । रायले झम्टेपछि ती भागाभाग गरे । तर, फेरि एकै छिनमा प्रहरीको पछिल्तिर आइपुगेर होहल्ला गर्दै हामीतिर ढुंगा प्रहार गर्न थाले । मैले स्थिति बिग्रन थालेको महसुस गरेँ । लोकेन्द्रजीलाई मैले भनें, ‘अब हामी चाँडो भाषण टुङ्ग्याएर पूर्वकार्यक्रमबमोजिम गाडीबाट काठमाडौं जाऊँ ।’ त्यो झुन्डले बाक्लै ढुंगा हान्न थाल्यो । प्रहरीले चाहिँ ‘ढुंगा नहान्’ भन्ने तर अरू केही नगर्ने देखियो । हाम्रा श्रोता उठेर हिँड्न थाले । हामीले पनि कार्यक्रम छोट्याएर समापन गर्‍यौँ ।
लोकेन्द्रजी, पशुपतिजी, हेमबहादुर मल्ल, मोहम्मद मोहसिन र म सभास्थलबाट निस्कियौं । नजिकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको घर थियो । प्रजिअकी श्रीमतीले हामीलाई देखिछन् । उनले चिया खान अनुरोध गरिन् । हामी उनको घरको माथिल्लो तलामा गयौं । एकै छिनमा प्रजिअ आइपुगे । उनले भने, ‘हजुरहरू यहीँ मेरै आवासभित्र बस्नुस् । बाहिर स्थिति ठीक छैन ।’ यत्ति भनेर उनी तुरुन्तै बाहिर निस्किए । हामीलाई ढुंगा हान्ने टोली हाम्रो नाम लिँदै घर खोज्दै हिँडिरहेको रहेछ ।
हामीभन्दा पछाडि रहेका खेमराज पण्डित, राजेश्वर देवकोटा, पद्मसुन्दर लावतीलगायत साथीहरू नजिकैको रेडक्रस भवनमा गएछन् । ढुंगा हान्ने हूल रेडक्रस भवनभित्रै गएछ । हूलले खेमराज पण्डितलाई निर्घात पिटेर, मर्‍यो भन्ने ठानेर घरको बरन्डामा फालिदिएछ । त्यो हूल लावतीलाई पनि खोज्दै गयो । उनको स्वभाव निडर थियो । उनी आँट र हिम्मतका धनी थिए । र, लावतीले उनीहरूलाई ‘म विष्णु लिम्बु हो । किन चाहियो तिमीहरूलाई’ भनेछन् । उनी यसरी बँचे ।
पण्डित, देवकोटालगायत साथीहरू भाग्यले बाँचेछन् । करिब २ घण्टासम्म त्यो हुल्याहा झुन्डले आतंक मच्चायो । सायद काकतालीले प्रजिअको घर नपुगेको भए हामी पनि बाँच्ने थिएनौं । बेलुका प्रजिअ घर आइपुगे । उनीसँग हाम्रो प्रश्न थियो, ‘यति सानो हुल्याहा झुन्डलाई पनि नियन्त्रणमा लिन किन नसकेको ?’ प्रश्नको जवाफमा उनी इमानदार थिए । उनले भने, ‘हजुरहरूलाई थाहै छ, देशमा के हुँदै छ । म त एउटा कर्मचारी मात्रै हुँ । म सकेसम्म हजुरहरूलाई बचाउँछु ।’ त्यो रात ११ बजे केही सहयोगी साथ लगाएर हेमबहादुर मल्ललाई सिमाना कटायौं । उनको ज्यानको सुरक्षा भएपछि हामी राति १ बजे जिपबाट काठमाडौंतिर लाग्यौं । त्यसबखत सरकारको एउटै नीति थियो— जसरी भए पनि राप्रपालाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा उठ्न नदिने र उठ्ने प्रयास गरे जिल्लाजिल्लाबाट खेद्ने । अझै दाङमा त म, जोगमेहर श्रेष्ठ, विश्वबन्धु थापा र मोहम्मद मोहसिनलाई झन्डै सफाया गरिसकेका थिए ।
हिमालयको उचाइ र इच्छुमतिको दुर्गन्ध
कुनै पनि व्यक्तिको वैचारिक प्रतिबद्धताको मापदण्ड संघर्षको अवस्थामा नभई सत्तामा पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । शक्तिमा नपुगुन्जेल प्रजातन्त्रवादी/अग्रगामी र भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यी मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता र परीक्षा सत्तामा पुगेपछि मात्रै अवगत हुन्छ । हामीमाथि हमलाको त्यो शृंखला चल्दा देशका प्रधानमन्त्री थिए— सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई । काठमाडौंमा उनीसँग भेट भयो । मैले हामीमाथिका हमलाका घटना बयान गरेँ । साबिकझैं उनले त्यसलाई ठट्टेउलो पारामा उडाए । उनले भने, ‘डाक्टर साब, यस्ता सानातिना कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन छोडिदिनुस् ।’ तर, म र अन्य साथीहरूका लागि दुई दिनमा दुईपटक मृत्युसँगको त्यो जम्काभेट सहज थिएन ।
हमलाबाट डराएर हामी कोठाभित्र बसेनौं । दुवै राप्रपा देशका विभिन्न ठाउँमा आभसभा गर्दै गयौं ।
इतिहासमा राजनीतिक नेतृत्व एउटा उचाइमा पुगेपछि त्यहाँ अडिन नसकेर तल झरेका थुप्रै उदाहरण छन् । हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहास पनि यस्तै छ । यसको उदाहरण अहिलेको सरकार नै छ सबैसामु । दुई वर्षअघि यो सरकार र यसको नेतृत्वको उचाइ झन्डै हिमालय पर्वतजस्तो सफा र अग्लो देखिन्थ्यो । आज यो सरकार काठमाडौंको दुर्गन्धित इच्छुमती (टुकुचा) को तहमा पुगेको छ, जहाँ इमानदारी र नैतिकता माथिदेखि तलसम्मै सखाप भएर जाँदै छ । यस सरकारको विरोधमा हजारौं युवा वाक्क भएर स्वतन्त्र रूपमा सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो शुद्धीकरणको प्रयास नयाँ पिँढीको चेतावनी हो । नयाँ पिँढीको चेतावनीलाई उपेक्षा गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व आफैं समाप्त पारौं भन्ने दिशामा अग्रसर हुनु हो ।
-लेखक राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : असार १३, २०७७ ११:३८
चामल र तरकारी पनि आयात नगरी नचल्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नेपाल दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
जेष्ठ १३, २०७७ प्रकाशचन्द्र लोहनी
कोभिड–१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात पारिसकेको छ । आउँदा दिनहरूमा अझ कति जनधनको नोक्सानी हुने हो, स्पष्ट भइसकेको छैन । दुई–चार सय जनालाई कोरोना देखिनेबित्तिकै देशका विभिन्न अस्पताल चिकित्सकीय सुविधाको अभावमा कराउन थालिसकेका छन् ।
संक्रमितको संख्या दस–बीस हजार पुग्यो भने हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य संरचनाले थाम्ला ? जनताको हालत के हुने हो ? सबैमा आशंका र चिन्ता पैदा भएको छ ।
यो महामारी अन्ततोगत्वा दुई तरिकाले मत्थर हुनेछ । पहिलो, आउँदो एक वर्षभित्र खोप तयार भयो भने । यस दिशामा सबैजसो सम्पन्न देश अनुसन्धानमा संलग्न छन् र कसले पहिले भ्याक्सिन निकाल्ने भन्ने होडबाजीमा छन् । आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आजको विश्वमा यदि यो भाइरसले गरिब र विपन्न वर्गलाई मात्र हमला गर्ने भएको भए यस्तो तदारुकता देखिने थिएन होला । तर यो भाइरसले धनी–गरिबमा भेद नगर्ने देखियो । अमेरिकाको राष्ट्रपति भवनमा काम गर्ने अधिकृतदेखि बेलायतका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि यसले छोडेन । संसारकै धनाढ्य र शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूलाई समेत थाहै नदिई आक्रमण गर्ने यो रोगको क्षमताले गर्दा विश्वको जनधनको स्रोत अहिले यसविरुद्ध
खोप बनाउने अभियानमा लागेको छ । अर्कातिर, खोप आउन ढिलो भयो भने मानव जातिले यसलाई एड्सजस्तै कुनै किसिमबाट व्यवस्थापन गरेर योसँगसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो दोस्रो विकल्पबारे पनि छलफल हुन थालिसकेको छ । धनी देशहरूलाई एक हदसम्म यो सम्भव हुन सक्छ तर हाम्रोजस्तो गरिब र शासकीय संरचनामा भ्रष्टाचारको भाइरसले गाँजेको देशमा कोरोनासँगसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनताको जीवनमा कस्ता कष्ट आउने हुन्, कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ ।
जस्तोसुकै कडा भए पनि यो महामारी सधैं नरहला । खोपका माध्यमले निर्मूल पार्ने या यस्तो सम्भव नहुन्जेल मानवीय र चिकित्सकीय व्यवस्थापनबाट योसँग बस्नुपर्नेछ । तर जुनसुकै स्थिति आए पनि यो भाइरसले अब नेपालमा आधारभूत परिवर्तनको माग गरेको छ । तीमध्ये पहिलो हो, हाम्रो आर्थिक बनावट या मोडलमा आमूल परिवर्तन । दोस्रो, विश्वव्यापीकरण र नेपालको यससँगको सम्बन्धबारे नयाँ चिन्तन । तेस्रो, राजनीति र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध । चौथो, बजार व्यवस्थापन र राज्यबीचको अन्तरसम्बन्ध । यी चारै क्षेत्रमा नेपालमा समेत अब आमूल परिवर्तनको कल्पना नगर्ने हो भने यो भाइरसले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्नेछ ।
आर्थिक मोडल र आर्थिक संकट
अति गरिब राष्ट्र भए पनि नेपालमा चरम आर्थिक संकट परेको छैन । जहानियाँ शासनको जमानामा सामन्तवादी शोषण र करको भार थाम्न नसकेर र आर्थिक रूपमा टिक्न नसकेर नेपालीहरू विदेश पसेका हुन् । यसै क्रममा भारतका विभिन्न (असम, मिजोरम इत्यादि) ठाउँमा नेपालीहरू बाँच्न आफ्नो माटो छाडेर गएका हुन् । २००७ सालपछि यो क्रम शिथिल भयो । सापेक्षिक रूपमा समाज खुला हुँदै गयो, ‘विकास’ शब्दले सबै खाले भाषणमा प्राथमिकता पाउँदै गयो र केही महत्त्वपूर्ण पुँजीगत निर्माणका काम पनि सुरु भए । यस अवधिमा नेपाल गरिब रहे पनि नेपाल राज्यले चरम आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थिएन । तर संकट नपरी परिवर्तनको अनुभूति हुन गाह्रो हुने रहेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भारतमा देखियो ।
नेहरूको समाजवादले सुस्ताएको भारतको अर्थतन्त्र सन् १९९० सम्म आइपुग्दा टाट हुन पुग्यो । एक महिनासम्मको आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा पनि भारतसँग थिएन । यो आर्थिक संकट थेग्न नसकेर मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारवादको नयाँ अध्याय सुरु गरे । नेहरू समाजवादको छातामा इन्दिरा गान्धीले खडा गरेको ‘लाइसेन्स राज’ हटाए । भन्सार दर कम गरे । विदेशी लगानीलाई सजिलो बनाए र देशको आर्थिक बनावटमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरे । नेहरू समाजवादभन्दा ठीक विपरीत थियो यो । देशै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि मात्र नेहरू मोडलमा आधारभूत परिवर्तन गरियो ।
त्यस्तै, चीनमा माओले ‘रोमाञ्चकारी समाजवाद’ को नयाँ मोडलअन्तर्गत सन् १९५० को दशकको अन्तसम्ममा २६,००० कम्युन स्थापना गरे र किसानहरूको सानो करेसाबारीमा निजी खेती गर्ने अधिकार पनि खोसिदिए । १९६० को दशकको मध्यसम्म पुग्दा यो नयाँ मोडलले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको थियो । माओको रोमाञ्चकारी राजनीतिक कल्पनाको दौडको हविगत देखेर त्यस बखत नै चीनका राष्ट्रपति ली साउचोको भनाइ थियो, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र विघटनको संघारमा पुगिसक्यो ।’ सन् १९६३ मै देङले देशको गिर्दो आर्थिक अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा भनेका थिए, ‘उत्पादन बढ्छ भने निजी खेती स्वीकार गर्नुपर्छ । कालो होस् या सेतो, बिरालोले मुसा मारुन्जेल त्यो असल बिरालो ठहरिन्छ ।’ सन् १९६७ मा सुरु भएको ‘महान् सांस्कृतिक क्रान्ति’ ले औद्योगिक उत्पादनमा समेत २० प्रतिशत ह्रास ल्याई आर्थिक र राजनीतिक अराजकता संस्थागत गर्‍यो । स्वयं देङ यसको सिकार हुन पुगे । १९७० को दशकमा माओको निधनपछि मात्र उनको विकास मोडलको अन्त भयो र आर्थिक क्षेत्रमा ‘देङ मोडल’ लागू भयो । चरम आर्थिक संकटका कारण नै चीनले नयाँ मोडल स्वीकार गरेको हो, जुन आज पनि पुँजीवादी र बजारमुखी दिशामा निरन्तर परिमार्जन गरिँदै छ ।
अब नेपालको विचार गरौं । ३० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक मोडलमा दुई मूल खम्बा देखिएका छन् । पहिलो हो, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सिफारिस गरेको नवउदारवाद । यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क यो लेखको विषय होइन, तैपनि एउटा कुरा के निश्चित छ भने, कृषि र उद्योगसम्बन्धी विकसित हुँदै आएका कतिपय अन्तरसम्बन्धलाई यसले धक्का दियो । उदाहरणका लागि, नेपालमा चुरोट कारखाना खडा भएपछि चुरोटलाई चाहिने सुर्ती नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सुर्ती विकास कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि तराई मधेसका थुप्रै जिल्लामा सुर्ती खेती विस्तार हुँदै गएको थियो । जुट विकास गर्न जुट विकास कम्पनी खडा गरी जुट मिलहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइएको थियो । गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाका माध्यमले देशभित्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने राम्रो कामको सुरुआत भएको थियो । नेपालगन्जमा खडा गरिएको कपास विकास कम्पनीमार्फत कपासको उत्पादनले गति लिँदै गएको थियो । किसानबाट यो कपास किनेर हेटौंडा कपडा कारखानालाई कच्चा पदार्थ आपूर्ति गरिन्थ्यो, जसले गर्दा यो कार्यक्रमले सुस्त भए पनि गति लिँदै गएको थियो । यातायात क्षेत्रमा वातावरणमैत्री ट्रली बस काठमाडौंमा मात्रै सीमित नगरी देशका अन्य क्षेत्रमा पनि लग्ने योजना थियो ।
तर, नवउदारवादको भेलमा यी सबै उद्योग सखापप्रायः भए र किसानहरूको नयाँ नगदे खेती पनि बन्द भयो । यस्ता किसिमका उद्योग र कृषिको अन्तरसम्बन्ध बढाउने चिन्तनमा रोक लाग्यो र अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने सट्टा आयात–उन्मुख अर्थतन्त्रले बल पायो । नेपालको आर्थिक मोडलको दोस्रो पक्ष आयातकेन्द्रित हुँदै गयो । बढ्दो आयात र घट्दो औद्योगिकीकरणको प्रवृत्तिले गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई समाधान गर्न नेपालको सत्तावर्गले श्रम निर्यातलाई प्रोत्साहन दियो । यसबाट दुइटा फाइदा थियो । पहिलो, काम नपाएर बसेका युवा देशभित्रै रहे राजनीतिक समस्या खडा हुन सक्ने थियो । युवा बेरोजगारलाई विदेश पठाउन पाए एक हदसम्म यो समस्या समाधान हुने भयो । दोस्रो, बेरोजगार युवाले पठाएको विप्रेषणले राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने भएकाले काठमाडौंका शासकहरूलाई सत्तामा ठाँटबाँटसहितको उपस्थिति कायम गर्न र विकासको नारा दिन सजिलो भयो । हाम्रो विगतको सामन्तवादी इतिहासमा पनि यस्तै खाले उदाहरण छन् ।
बेलायती उपनिवेशवादले चन्द्रशमशेरको समयमा नेपालको सीमासम्म रेल विस्तार गर्‍यो । यसको मूल उद्देश्य नेपालको तराईको जंगलबाट काठ उपलब्ध गर्ने थियो । तर त्यस बेलाका सापेक्षिक रूपमा गरिब नेपालका शासकहरूलाई यो ठूलो मौका भयो । उनीहरूले वन फँडानी गरी काठ निर्यात गरे भने, फाँडेको जमिनमा विभिन्न बिचौलियाहरू (जमिनदार) इत्यादि खडा गरी आम्दानीको नयाँ स्रोत निर्माण गरे । यस्तै किसिमबाट झन्डै सय वर्षपछि नेपालका प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी भनिने शासकहरूका लागि नेपालको बढ्दो युवा जनशक्तिलाई खाडी देशमा पठाउनु आम्दानीको नयाँ स्रोत हुन पुग्यो । राज्यको विस्तार गर्न र एउटा अभिजात्य वर्ग खडा गर्न नयाँ आधार भयो ।
यसको खास सुरुआत सन् १९९८ मा भयो । यो वर्ष राष्ट्रिय आयको अनुपातमा विप्रेषणबाट हुने आम्दानी राष्ट्रिय उत्पादनको १.३९ प्रतिशत थियो । २००१ मा यो २.४४ पुग्यो र त्यसपछि तीव्र गतिले बढ्दै गयो । २००३ सम्म आइपुग्दा विप्रेषणबाट हुने आम्दानी राष्ट्रिय उत्पादनको १२ प्रतिशत पुग्यो भने २०१७ मा २८ प्रतिशत । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, दोस्रो जनआन्दोलनपछि हाम्रो देशका क्रान्तिकारीहरूले बढीभन्दा बढी नेपाली युवा बाहिर पठाउन र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट राजस्व जम्मा गर्न थाले, जसका कारण राज्यको साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भयो । सामन्तवादको समयमा बेलायतले रेल बनाएपछि जंगलको कटान र नेपालीहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ना गराएर आउने स्रोतबाट काठमाडौंका ठूला दरबार बनेका थिए । विडम्बना, मार्क्सवाद–लेनिनवाद र समाजवाद बोक्नेहरूले ठीक त्यही पुरानो सामन्तवादी शैलीअनुरूप नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाई आएको राजस्वबाट एउटा नयाँ अभिजात्य वर्ग खडा गरे, विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो । तर रोजगारी दिन सक्ने उत्पादनशील उद्योगको योगदान सन् २००० मा ९.६ प्रतिशत थियो भने, २०१८ सम्म आइपुग्दा ५.६ मा झर्‍यो र कृषिमा गतिशीलतालाई उपेक्षा गरियो ।
नयाँ शासकहरूले नेपाललाई सफलताका साथ परनिर्भर देशमा रूपान्तरित गरे । विप्रेषणबाट आएको आम्दानीलाई पुँजी निर्माणमा लगाउने चासो देखाएनन् । नयाँ अभिजात्य वर्गको साख र सम्पत्ति बढ्यो तर नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता छिमेकी देशहरूको दाँजोमा कमजोर हुँदै गयो ।
दलाल पुँजीवाद र देशमाथि आएको चुनौती
जहाँसम्म करको कुरा छ, नेपाली जनताले कर सरकारलाई तिरेका छन् । कर र राष्ट्रिय आयको अनुपात बंगलादेशको १२.५ प्रतिशत छ भने नेपालको २३ प्रतिशतभन्दा माथि । तैपनि नेपालको शासकवर्गलाई पुँजीनिर्माणमा सधैं संकट छ । किनभने यो तिरेको करको ९० प्रतिशत साधारण खर्चमा जान्छ । अभिजात्य वर्गको ठाँटबाँट र सोखसयलमा धेरै उडेर जान्छ । जेजति बाँकी रहन्छ, त्यसको पनि व्यवहारमा दुरुपयोग हुन्छ । बिचौलिया वर्गको सहयोगमा विकासका नाममा अभिजात्य वर्ग झन् मोटाउँछ । स्वभावतः धनी र गरिबबीचको आर्थिक असमानता बढेर जान्छ । नेपाली राजनीतिको आजसम्मको सबभन्दा ठूलो असफलता यही हो ।
सन् २००१ देखि विदेशमा नेपाली युवा पठाउने नीति लागू भयो । हामीले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिलाउन ध्यान दिएनौं । उनीहरूलाई विदेशमा पठाएर आएको विप्रेषणमा रमाएर मीठा भाषण गर्‍यौं, तर नेपाल र नेपालीको उपेक्षा गर्‍यौं । देशको कृषि र उद्योगको उपेक्षा गर्‍यौं अनि आज नेपाललाई हरेक कुरामा विदेशीमा भर पर्ने परनिर्भर देशका रूपमा खडा गर्‍यौं । यहाँसम्म कि, कृषिप्रधान देश चामल र तरकारी पनि विदेशबाट नआई नचल्ने स्थिति बनायौं । स्पष्ट शब्दमा यो नेपाली जनताप्रति धोका हो र ‘विकास’ शब्दकै उपहास हो । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नेपाल राज्य दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
संसारमा विप्रेषणको आडमा मात्र उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु मूर्खता हो । हो, विप्रेषणलाई लगानी वृद्धिका लागि अल्पकालीन अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर देशको कृषि, उद्योग र मानवविकासमा फड्को मार्ने अनि बिस्तारै विप्रेषणमाथिको भर घटाउँदै जाने एउटा बाटो हुन सक्छ । तर लागूपदार्थ खाने मानिसले लत लागेपछि छोड्न नसकेजस्तै विप्रेषणमा अडेको एउटा नयाँ अभिजात्य वर्ग नयाँ बाटो लिन चाहँदैन । कोभिड–१९ ले यो सपनाको संसारबाट अब यथार्थको धरातलमा उभिनुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ । नेपाली युवाको विप्रेषणले धानेको आर्थिक मोडल अब यो महामारीले चकनाचूर पारेको छ र वास्तवमा नेपाललाई विसं २००७ सालपछि पहिलोपल्ट चरम आर्थिक संकटमा उभ्याएको छ ।
सन् १९७० को दशकमा चीनमा देङ र सन् १९९० मा भारतमा मनमोहनले गरेजस्तो राजनीतिक आँट नेपालमा खडा भएको मार्क्सवादको नयाँ रूप दलाल पुँजीवाद र नवसामन्तवादले देखाउन सक्ला ? आशा गर्ने ठाउँ कम छ, किनभने कोभिड–१९ बाट पीडित गरिब नेपालीका लागि औषधि किन्नमा समेत व्यापक र बेलगाम भ्रष्टाचार गर्ने शासकवर्गले अहिलेसम्म समातेको बाटो परिवर्तन कसरी गर्ला र ? तर पनि अब अभिजात्य वर्गको हितकेन्द्रित विप्रेषणलाई निरन्तर आधार सम्झने आर्थिक मोडलमा परिवर्तनको विकल्प छैन । यो यथार्थलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकबाट टोपी थापेर ल्याएको रकमले मात्र अब देश चल्नेछैन । तर पुरानो एमाले र अहिलेको डबल नेकपाले यो चुनौती सामना गर्न सक्ला ? बहुदलीय जनवादको ब्रान्ड भजाएर विप्रेषणको बलमा फस्टाएको दलाल पुँजीवादको गाडीमा जेजति चनाचमेना उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई लाजै नमानी चपाउँदै हिँडेको जनवादले मोड परिवर्तन गर्न सक्ला भन्ने ठाउँ, यो दुई वर्षको रवैया हेर्दा, देखिँदैन । यो महामारीलाई देशको अर्थ व्यवस्था संस्थागत रूपमा परिवर्तन गर्ने, नयाँ मोडलमा अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा लिन नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व अरू कसैको कारणबाट नभई राजनीतिक नेतृत्वका कारण संकटमा पर्नेछ । दुर्भाग्यवश, राजनेताहरूमा यो यथार्थको चेतना रहेको छनक पाउन सकिएको छैन ।
(लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०८:५७